Sawirro: Sida xornimada looga arko Afrika - BBC Somali
Sawirro: Sida xornimada looga arko Afrika
18 Febraayo 2014
Sida xornimada looga arko Afrika
Liz Boakes ayaa qaadday sawirkan nin Masai ah oo wiil yar ku caawinaya inuu ka gudba Lake Magadi. Waxay ku dhalisay culayska haysta dadka soo koraya ee ah inay kala xushaan noolosha baadiyaha iyo tan casriga ah.
Sawrikan waxaa qaadday Kerry Ann Moseley, oo 21 sano jir ah. Waxay leedahay Gerigu waxaa uu leeyahay xornimo uu ku gaaro halka uu doonayo.
Sawrikan waxaa qaadday Taniya Morris iyadoo joogta Tanzania. Waxay leedahay waxay qaadday iyadoo safar afar sano ah ku maraysa qaaradda Afrika. Waxay leedahay "xornimadu waa sidan"
Sawirkan waxaa laga qaaday Graig Pillay, oo sheegay inuu xornimo dareemay markuu tegay dekadda Elizabeth ee South Afrika. Sawirkan waa isaga iyo wiilkiisa
Sawirkan waxaa qaadday Alice Jino, oo 24 sano jir ah, waxay dareentay nasasho markay booqatay ehelladeeda. Waxay leedahay xornimada waxay iyada u tahay inaad nasatid adigoo qalbigaagu deggan yahay.
Ninkan reer South Afrika ee Roberto, waxaa uu sharaf u arkaa inuu qeyb ka yahay South Afrika kaddib markii laga soo baxay xukunkii midib kala sooca. Waxay isku si timaha u hagaajisteen gabadha shaqaalaha u ah, taas oo astaan u ah inay isku mid yihiin
Waa sawirka haweeney kaxaynaysa cagafcagaf ay iyadu leedahay, waxay astaan u tahay sida ay xor ugu tahay inay danaheeda qabsato oo ay noolasheeda maaraysa.